बुटवलको आइसोलेशन सेन्टर, जहाँ छ घरयाशी वातावरण ! | Mechikali Daily
बुटवलको आइसोलेशन सेन्टर, जहाँ छ घरयाशी वातावरण !
Posted By: रमेश पराजुलीon: २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १३:१६
बुटवल, जेठ २० । ‘जानु जी, तपाइँलाई कस्तो छ ? मनोबल यसरी नै उच्च राख्नुहोला हामी साथमा छौं है ।’ बुटवल उप–महानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले टेलिफोनमा मेरो बारेमा हालखबर सोध्नुभयो । आइसोलेशनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि केही कुरा भयो ।
नगर प्रमुखले मलाई यसो भनिरहँदा आइसोलेशन सेन्टरमा हाम्रो रेखदेखमा रहेका उप-महानगरका स्वास्थ्यकर्मीहरु र अरु कर्मचारीहरुले विवरण अद्यावधिक गर्नेदेखि हाम्रै लागि तातोपानी, सुप र अरु खाजा नास्ताको व्यवस्था मिलाउने काम गर्दै थिए ।
मसँग कुरा भएको लगत्तै प्रमुखको सचिवालय र त्यहाँको स्वास्थ्य शाखाबाट यहाँ आइसोलेशन सेन्टरमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई राम्रो संग हेरचाह गर्न निर्देशन दिइएको रहेछ । मैले पत्रकारिता गरिरहेको कुरा उहाँहरुलाई पनि थाहा भयो र पत्रकारिताकै दौरानमा रिर्पो्टिङमा जाँदा साथीसंगको कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा मलाई पनि कोरोना पोजेटिभ पाइएको हो ।
रिपोर्ट आउँदाको डर र त्रास यहाँ आएपछि हरायो
सुरुमा डर त्रास सहित आएको थिए । यहा आए पछी मेरो डर हटिसेको छ । नगरपालिकाले आईसोलेशन वनाउदा सामाजिक दुरी कामय हुने गरी वनाएको छ । केही कोठामा दुईवटा वेड छन । धेरै कोठामा दुई तीन जना वस्ने गरी वनाईएको छ । हामी यहाँ १८ जना संक्रमित रहेका छौ । सबैलाई पहिलाको डर हराएको छ । यहाँ अस्पतालमा बसेको जस्तो अनुभूति नै छैन । एउटा कुनै होटलमा बसेको जस्तो भइरहेको छ ।
जहाँ छ घरयाशी वातावरण
यो आइसोलेशन सेन्टर वास्तवमै घरायशी वातावरणको छ । यहाँ हामीलाई नियमित व्याम गर्न लगाईन्छ । यहाँ हामीलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा व्यवस्थापनमा जुटेका सवै सहयोगी भावनाका रहेका छन । तातोपानी खानको लागी प्रत्येकलाई हटपट दिईएको छ । खानाको राम्रो व्यवस्थापन भएको छ । दिनमा २ पटक खाजा अनी २ पटक नास्ता आउने गर्दछ । यस्तै भिटामिन सि प्राप्तीको लागि कागतीको समेत व्यवस्था गरीएको छ । तापक्रम जाँच गर्न सवैलाई अलग अलग डिजिटल थर्माेमिटर दिईएको छ । हरेक समयको हेक्का राख्ने गरिएको छ ।
दुःखमा साथ दिने बुटवल
व्यावस्थापनमा जुटेका कर्मचारी र हामी संक्रमित सबै रमाईलो गर्दै बसेका छौं । साउण्ड सिस्टम लगाएर हामी नाँच्दै मनोरन्जन गर्ने गरेका छौँ । यहाँको वसाई कुनै अस्पतालको जस्तो वसाई लागेको छैन । हामीलाई घरमै वसेको जस्तो अनुभुती भएको छ । हामी सवै एकै परिवारको सदस्य जस्तो अनुभुती भएको छ । यहाँ हामीलाई हाम्रो चिन्ता छैन । बरु, घर परिवार कै यादले सताउने रहेछ । ति याद हटाउन साथ दिएको छ म आउने दिनमा जोडेको वाईफाईले । त्यसैले दुखमा साथ दिएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु बुटवल उप–महानगरपालिकालाई ।
समाचार बनाएको आफै आएर बस्नुप¥यो
बुटवल उप–महानगरपालिकाले वडा नं–११, देविनगरस्थित एन्फा एकेडेमीमा निर्माण गरेको आइसोशेलन सेन्टरका बारेमा मैले समाचार लेखेको थिएँ । तर, यहीँ सेन्टरमा आफै आएर बस्नुपर्ला भनेर शोंचेको थिएन । जब मलाई मेरो माबोइलमा म्यासेज आयो त्यतिबेलै म आफ्नै मोटर साइकल चलाएर यहाँ आएको थिएँ । कपिलवस्तु जिल्लाबाट आएको मसंग संक्रमित भएको प्रमाण देखाउने अरु कागजात थिएन र केहीबेर बाहिरै बस्नुप¥यो ।
बुटवलमै रहेका साथीहरु प्रेस संगठनका जिल्ला संयोजक तथा उप–महानगरका प्रेस सल्लाहकार अमृत गिरी र आदरणीय दाजु भरत केसी जो पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग कुरा भएपछि उहाँहरुले सबै मिलाउनुभयो र म यहाँको आइसोलशनमा भर्ना भएर बस्न पाएँ । यहाँ अलग अलग कोठा, खाजा, नास्ता र खाना, स्नानघर, शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, खुला चौर र निःशुल्क वाइफाईसमेतको व्यवस्था रहेछ ।
यहाँ आएको आज पाँच दिन भयो । यो बीचमा मलाई कुनै कमजोरी महशुस भएको छैन, कुनै तनाव पनि उत्पन्न भएको छैन । यहाँको व्यवस्थापन र यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायतका साथीहरुको व्यवहार वास्तवमै उर्जा र हौसला दिने खालको छ, यस्तै कायमै रहोस् । म सँगै कपिलवस्तुकी पत्रकार साथी र अर्की सानी बहिनी पनि यहीँ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुसहित यहाँ रहनुभएका सबैजना अहिलेसम्म ठिकठाक छौं ।
कपिलवस्तुमा खाँचो छ व्यवस्थित आइसोलेशन सेन्टर
कोरोना संक्रमण भएपछि कता जाने दोधारमा थिए । म सुटुक्क निस्कीन चाहन्थें र त्यसै गरे पनि । म पत्रकार पनि भएको र यहाँ धेरै साथीहरु रहेका कारणले पनि मलाई त यहाँसम्म आउन सहज भयो । तर, अर्को जिल्लामा गएर भन्दा पनि आफ्नै जिल्लामा व्यवस्थित आइसोलेशन सेन्टर बनाउन जरुरी चाँही छ ।
कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरुको लागि व्यवस्थित आइसोलेसनको खाँचो छ । उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा हामी जस्ता कोरोना संक्रमितले कष्ट सहनु परेको छ । संक्रमितको संख्या वढनु र पूर्वतयारी नहुँदा एकैपटक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको छ ।
भएका आईसोलेसन पनि झारा टार्ने खालका आइसोलेसन छन । खुला सीमाना भएका कारणले पनि भारतबाट विभिन्न ठाउँबाट लुकिछिपी आउनेहरु घरमै बसेका पनि छन् । तिनीहरु सबै संक्रमित त छैनन् तर, जति छन् तिनले धेरैलाई संक्रमित बनाउने खतरा उत्तिकै छ । यो बेलामा सबैको सुझाबुझपूर्ण कामको खाँचो छ ।
कपिलवस्तुका पत्रकार पाण्डेले बुटवल आइसोलेशन सेन्टरबाट तयार पारेको अनुभूतिसहितको सामग्री ।